प्रेरितको पुस्तकले प्रारम्‍भिक इसाई जगतको प्रथम तीस वर्षलाई समावेश गर्दछ र यसमा, परमेश्‍वरको मण्डलीको निम्ति आज उहाँको इच्‍छाको बारेमा प्रेरणाप्राप्त निर्देशनद्वारा सिकाइएको छ। प्रेरित १—१४ मा, डेभिड एल. रोपर (David L. Roper) ज्यूले हामीलाई, हाम्रो मुक्तिदाताको स्वर्ग आरोहणद्वारा सुरु गरी पावलको पहिलो प्रचार-यात्रामा समाप्त गर्दै पहिलो शताब्दीको मण्डलीको इतिहासमा हामीलाई अघि डोर्‍याउनुभएको छ। यस पाठ्यक्रम, प्रेरित १५—२८ मा, उहाँले यरूशलेमको महासभाबाट सुरु गरेर पाठकहरूलाई रोममा भएको पावलको सेवकाइतर्फ अघि बढाउनुभएको छ।
प्रेरित १५—२८ द्वारा लेखिएको पुस्तक डेभिड एल. रोपर (David L. Roper) पाठ्यक्रमको लागि तपाईको शिक्षक बन्नेछ र पाठ्यक्रम सकिएपछि तपाईले त्यसलाई राख्न सक्नु हुन्छ ।